Inkqubela phambili yeYunivesithi »iYunivesithi iHodges
Ukuqhubela phambili kweYunivesithi
Indima yesebe le-Advancement yeYunivesithi kukuhlakulela ubudlelwane kunye nealumni, izihlobo, kunye noluntu olukhulu ekuxhaseni iinjongo zesikolo ukulungiselela abafundi ukuba basebenzise imfundo ephezulu kwimisebenzi yabo yobuqu, yobungcali kunye neyasekuhlaleni. Abo banxulumene neYunivesithi yaseHodges bayaqonda ukuba esi sikolo sikhetheke ngokwenene. Luluntu olwahlukileyo olwahlukileyo oluzele ngabantu abanezinto ezahlukeneyo abanomdla kuzo kunye nemisebenzi.
Apha, akukho zindlela zimbini zifana.
Okwangoku, indawo enye esivumelana ngayo echaza indawo yethu, ngumsebenzi onzima kunye nomnqweno wokufezekisa izinto ezinkulu, ukuqhubela phambili, kunye nokuzenzela ubomi obungcono kubo, kwiintsapho zabo, nasekuhlaleni.
Nje ukuba unxibelelaniswe neYunivesithi yaseHodges, luphawu olucacileyo lokuba uyinkokeli eyamkela inyani.
Ngaphezulu kwabafundi abayi-6,000, ubudlelwane bethu obuDibeneyo bezeMfundo, kunye nonxibelelwano lwethu lweB2B, sizimisele ukukukhonza kakuhle emva kokuthweswa isidanga okanye njengogxa woluntu. Umanyano lwakho neYunivesithi yaseHodges lubalulekile kuthi, kwaye sifuna ukuva kuwe.
Amava akho, nokuba ungumfundi okanye ungumhlobo, abalulekile ekukhuleni kwethu nakwimizamo yethu yokuqhubela phambili. Nceda usigcine sihlaziywa ngale nto uyenzayo ngoku nangeendlela ozibona ngazo IYunivesithi yaseHodges ukomeleza indima yalo kwilizwe lakho… kwaye kunjalo, ndwendwela rhoqo!
Umxhasi weYunivesithi yaseHodges uyaqonda ukuba isipho sabo simalunga nokugcina iziphumo zengqondo. Imalunga nokubonelela ngenkxaso efunekayo, ngelona xesha linzima, kumntu, ukuze bakwazi ukugqibezela iinjongo zabo nelilitye lembombo lokwenza ubomi babo kunye noluntu lwabo lube ngcono. Sonke siyazi ukuba imfundo ingabutshintsha ubomi kwaye olo tshintsho aluzi ngexabiso eliphantsi.
Kodwa, eso sidanga okanye isatifikethi esifunyenweyo asinakuze sithathwe kwaye oko kufezekisiweyo kudale ilungu elitsha lokuzibandakanya kuluntu lwethu.
Yinkxaso yakho, enayo, kwaye eya kuthi itshintshe umkhondo wobomi.
Asinakho ukubulela ngamnye kuni ngokwaneleyo ngale nkxaso kodwa nceda nazi ukuba siza kuzama!
Hlala ukhuselekile! Kwaye nceda uhlale unxibelelana!
Ukwabelana ngombutho wakho weYunivesithi yaseHodges okanye ukufunda banzi ngeendlela onokuthi uxhase ngazo umfundi waseHodges University, nceda unxibelelane noAngie Manley, uMlawuli weNtuthuko yeYunivesithi, 239.938.7728 OKANYE nge-imeyile ku amanley2@hodges.edu.
Nceda ucofe kwikhonkco elingezantsi ukubonisa inkxaso yakho namhlanje!